Iflethi okanye indlu ekwicomplex 1 inefenitshala entsha - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex 1 inefenitshala entsha
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguSuites Frida
USuites Frida yi-Superhost
Le yindlu encinci enazo zonke iinkonzo, zonke zizimele kwaye zonke zineenkonzo eziQhelekileyo zilandelayo, zonke zine-air-conditioning kwaye zineenkonzo ezininzi.
Onke amagumbi ethu abulawa iintsholongwane nge-ozone, esi sibulali ntsholongwane sinceda ukuphelisa ivumba elibi, ibhaktheriya kunye nefungi.
Sisusa ukuya kuthi ga kwi-99.999% ye-coronavirus. * Kwaye ibhaktheriya ** ngemipu ye-karcher brand spray
Eli lisebe eliNcinci elinazo zonke iinkonzo ezidityanisiweyo
Kwindawo yekhitshi Inesitovu sombane, i-microwave, umenzi wekofu, iikhabhathi, izinto zasekhitshini ezifana neepani, izitya kunye nezinto zokuthambisa.
Kwi-aria yegumbi Inebhedi ephindwe kabini, i-closet, imozulu, i-cable TV, i-Wi-Fi.
Kwindawo yokuhlambela. Ineetawuli, isepha yomzimba, iphepha langasese kunye neshawa yombane.
Khumbula ukuba ungafika ngexesha olifuna ngalo, ukufikelela kuzimele.Ngalo lonke ixesha xa sinxibelelanisa ukungena nokuphuma kwesebe, jonga imigaqo-nkqubo yokungena nokuphuma. Sinendawo yokugcina imithwalo xa kufuneka ushiye into.
Le ndlu ikufuphi kakhulu nesikwere se-aquarium malunga neebhloko ezine kude, malunga neebhloko ezimbini ukusuka apho ikwisikolo se-nautical. Ukuhamba ngomzuzu we-10 unokufikelela kwindawo yabakhenkethi eyaziwa ngokuba yi-boardwalk apho unokufumana i-cafe eqhelekileyo ye-parish, ii-portals. yonke indawo yabakhenkethi ephakathi kwedolophu
4.75 out of 5 stars from 152 reviews
4.75 · Izimvo eziyi-152
Aquarium square 4 iibhloko
Iibhloko ezi-2 zeSikolo saseNautical
Boulevard 2 iibhloko
Isibhedlele esiqhelekileyo saseVeracruz
Iziko labakhenkethi baseVeracruz 15 min ukuhamba
Umbuki zindwendwe ngu- Suites Frida
Izimvo eziyi-2 273
Ukufika uzimele ngokusebenzisa ikhowudi kunye ekhuselekileyo apho amaqhosha na ukungena, ikhowudi unikwa ngenye imini kuwe phambi kokufika yakho nge whatapp apho ndiya kuthumela kuwe ividiyo kwenu kukusebenza bhokisi kunye lokugqitha kwakunye indawo isebe elifanayo ukwenza ukufika kwakho kube lula
Asikwamkeli, kukufika okuzimeleyo ngokupheleleyo kodwa sijonge nantoni na oyifunayo.
Nangona kukho nayiphi na intandabuzo malunga nenkqubo, sinokukwamkela ngokwakho
Ukufika uzimele ngokusebenzisa ikhowudi kunye ekhuselekileyo apho amaqhosha na ukungena, ikhowudi unikwa ngenye imini kuwe phambi kokufika yakho nge whatapp apho ndiya kuthumela ku…